स्कूल बाट जेल पाइपलाइन को लागी सबैभन्दा प्रभावित छ? - शान्ति शिक्षा को लागी ग्लोबल अभियान
[अक्टोबर १, २०२१] क्यालिफोर्निया राज्य पोलिटेक्निक युनिभर्सिटीले अहिंसा अध्ययन (अहिंसा अध्ययन) मा श्री शान्तिनाथ सम्पन्न अध्यक्ष खोज्छ जब
स्कूल बाट जेल पाइपलाइन को लागी सबैभन्दा प्रभावित छ?
अगस्ट 27, 2021 अनुसन्धान 0
(बाट पोस्ट गरिएको: अमेरिकन युनिभर्सिटी स्कूल अफ एजुकेशन। फेब्रुअरी २४, २०२१)
स्कूल-देखि-जेल पाइपलाइन अभ्यास र नीतिहरु लाई बुझाउँछ कि असमान रूप बाट आपराधिक न्याय प्रणाली मा रंग को बिद्यार्थीहरु लाई राख्छन्। कठोर अनुशासनात्मक उपायहरु र कानून प्रवर्तन को लागी रेफरल को अति उपयोग को पक्षपाती आवेदन समस्या मा योगदान, असफलता को लागी कमजोर विद्यार्थीहरु लाई स्थापित गर्न र अन्तर्निहित कारणहरु लाई बेवास्ता गर्न।
कसरी शिक्षकहरु जेल देखि जेल पाइपलाइन अन्त्य गर्न सक्छन्? पहिलो चरण स्कूल अनुशासन को लागी एक वैकल्पिक दृष्टिकोण मा विचार गरीरहेको छ।
अधिक जान्न को लागी, अमेरिकी विश्वविद्यालय को द्वारा बनाईएको इन्फोग्राफिक (तल पोस्ट) को जाँच गर्नुहोस् शिक्षा नीति र नेतृत्व मा डॉक्टरेट कार्यक्रम।
शून्य सहनशीलता नीतिहरु को खतरा
शून्य सहिष्णुता नीतिहरु ड्रग्स र सख्त अपराध कानूनहरु को युद्ध बाट उत्पन्न भयो जसले संयुक्त राज्य अमेरिका मा १ 1980 s० र १ 1990 ० को दशक मा सामूहिक कैद धेरै बृद्धि भयो। किशोर र स्कूलको वातावरण को बीच अपराध लाई सम्बोधन गर्न को लागी यस्तो नीति को विस्तार के शिक्षा र सामाजिक न्याय को वकालत गर्नेहरुलाई अब स्कूल बाट जेल पाइपलाइन भनिन्छ।
शून्य सहनशीलता नीतिहरु को उत्पत्ति
सार्वजनिक विद्यालयहरुमा शून्य सहिष्णुता नीति १ 1994 ४ बन्दूक मुक्त विद्यालय अधिनियम (GFSA) बाट उत्पन्न भएको हो। यस ऐन अन्तर्गत, विद्यालयमा बन्दुक ल्याउने सजाय कम्तीमा एक शैक्षिक बर्षको लागी निलम्बन हो। GFSA को परिचयले शून्य सहनशीलता नीति को विस्तार को लागी अन्य अपराधहरु लाई स्वीकार गर्न र कानून प्रवर्तन को लागी रिपोर्टिंग लाई बढायो। १ 1994 ४ देखि विद्यालय जिल्लाहरुले कडा नीतिहरु अपनाएका छन् जसले कम गम्भीर अपराधहरुको लागी कडा सजायको आदेश दिईरहेको छ।
शून्य सहनशीलता नीतिहरु को प्रभाव
शून्य सहिष्णुता नीतिले नाटकीय रूपमा निलम्बित वा निष्कासित गरिएका विद्यार्थीहरुको संख्या बढाएको छ। यसले गम्भीर असर पारेको छ। उदाहरण को लागी, जो विद्यार्थीहरु एक बर्ष मा कम्तीमा १५ दिन को स्कूल बाट छुट्छन् सात गुना बढी हाई स्कूल छोड्ने सम्भावना हुन्छ। आफ्नो शिक्षा पूरा गर्न असफल विद्यार्थीहरु गरीबी, गरीब स्वास्थ्य, वा आपराधिक न्याय प्रणाली मा समय जस्तै नकारात्मक नतिजाहरु अनुभव गर्न को लागी अधिक संभावना छ। यसबाहेक, यो निर्धारित गरीएको छ कि स्कूल अनुशासन मा असमानता सिक्ने अवसरहरुमा असमानता को लागी योगदान गर्दछ। यो पनि निर्धारण गरिएको छ कि कालो विद्यार्थीहरु सेतो बिद्यार्थीहरु संग तुलना मा स्कूल बाहिर निलम्बन को परिणाम को रूप मा धेरै दिन को शिक्षा को धेरै दिन को रूप मा याद छ।
बाटो मा, स्कूलहरु लाई धेरै स्कूल संसाधन अधिकारीहरु (SROs), कानून प्रवर्तन पेशेवरहरु जो विद्यार्थी सुरक्षा र अपराध को रोकथाम को लागी जिम्मेवार छन् भाडामा लिएका छन्। SROs को बढि नियुक्ति गिरफ्तार विद्यार्थीहरु को संख्या मा बृद्धि भएको छ, साथै कानून प्रवर्तन र किशोर अदालतहरु लाई रेफरल को संख्या मा वृद्धि भएको छ।
स्कूल-देखि-जेल पाइपलाइन बाट को धेरै प्रभावित छ?
तथ्या statistics्कले एक धमिलो तस्वीर चित्रित गर्दछ: सीमान्तकृत समूहहरु बाट विद्यार्थीहरु लाई स्कूल बाट जेल पाइपलाइन मा खिचिएको सबैभन्दा ठूलो जोखिम हो।
न्याय प्रणाली मा किशोर सहभागिता को लागी जोखिम कारक
त्यहाँ न्याय प्रणाली मा किशोर सहभागिता को बारे मा विभिन्न जोखिम कारक स्तरहरु छन्। व्यक्तिगत जोखिम कारकहरु मा असामाजिक व्यवहार, अति सक्रियता, र पदार्थ को दुरुपयोग शामिल छ। पारिवारिक जोखिम कारकहरुमा दुर्व्यवहार गर्ने आमा बुबा, कम सामाजिक आर्थिक स्थिति, र किशोर आमाबाबु सामेल छन्। सहकर्मी जोखिम कारक साथीहरु बाट गिरोह, गिरोह सदस्यता, र कमजोर सामाजिक सम्बन्धहरु सामेल छन्। विद्यालय र सामुदायिक कारकहरु गरीब वा अव्यवस्थित समुदाय र गरीब शैक्षिक प्रदर्शन शामिल छन्।
कति विद्यार्थीहरु स्कूल बाहिर निलम्बन प्राप्त?
२.2.7 मिलियन K-१२ विद्यार्थीहरु २०१५-१ school शैक्षिक वर्ष को दौरान एक वा धेरै स्कूल बाहिर निलम्बन प्राप्त गरे। यो संख्या कालो वा अफ्रिकी अमेरिकी विद्यार्थीहरुमा एक असमान प्रभाव प्रकट भयो। जबकि यो जनसांख्यिकीय पुरुष र महिला दुबै को मात्र%% बनेको छ, उनीहरु २५% र १४% उनीहरुको सम्बन्धित लि gender्ग बाहिर स्कूल निलम्बन को प्रतिनिधित्व गर्दछन्।
तुलनामा, सेतो विद्यार्थीहरु आफ्नो नामांकन भन्दा कम दर मा स्कूल बाहिर निलम्बन प्राप्त। जबकि 25% पुरुष विद्यार्थी जनसंख्या र 24% महिला विद्यार्थी जनसंख्या सेतो थिए, उनीहरु मात्र 24% र 8% स्कूल बाहिर निलम्बन को प्रतिनिधित्व गर्दछन्।
हिस्पैनिक वा ल्याटिनक्स विद्यार्थीहरु मध्ये, पुरुष विद्यार्थीहरु महिला विद्यार्थीहरु भन्दा कहीं धेरै स्कूल बाहिर निलम्बन प्राप्त भयो। हिस्प्यान्क र ल्याटिनक्स पुरुष र महिला दुबै बिद्यार्थी जनसंख्या को १३% बनाइयो, तर उनीहरु क्रमशः १५% र%% स्कूल बाहिर निलम्बन को प्रतिनिधित्व गरे।
कति विद्यार्थीहरु कानून प्रवर्तन रेफरल र गिरफ्तारी प्रभाव पार्छन्?
२ 290,600 ०,2015०० विद्यार्थीहरुलाई कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरु लाई पठाइयो वा २०१५-१16 शैक्षिक बर्ष को दौरान गिरफ्तार गरियो। मात्र 15% विद्यार्थीहरु कालो वा अफ्रीकी अमेरिकन थिए, तर यी विद्यार्थीहरु कानून प्रवर्तन रेफरल र गिरफ्तारी को 31% को प्रतिनिधित्व गरे। ४%% विद्यार्थीहरु सेतो थिए, तर यी विद्यार्थीहरुले कानून प्रवर्तन रेफरल वा गिरफ्तारी को मात्र ३%% प्रतिनिधित्व गरे। 49% विद्यार्थीहरु हिस्पैनिक वा ल्याटिनक्स थिए, र यी विद्यार्थीहरु कानून प्रवर्तन रेफरल वा गिरफ्तारी को 36% प्रतिनिधित्व गरे।
किन र Color्गका विद्यार्थीहरु असमानतापूर्वक प्रभावित छन्
प्रणालीगत नस्लवादको कारण सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीहरु विद्यालय-जेल पाइपलाइनमा समाप्त हुने सम्भावना बढी हुन्छ। संरचनात्मक वा संस्थागत नस्लवाद को रूप मा पनि जानिन्छ, प्रणालीगत नस्लवाद जातीय असमानताहरु सिर्जना गर्ने र/वा कायम राख्ने प्रणाली र नीतिहरु लाई जनाउँछ।
अनुशासनात्मक कार्यहरु जुन अदालत रेफरल, निलम्बन, वा निष्कासन को परिणाम हो - जसमा सबै छोड्न र किशोर न्याय प्रणाली मा प्रवेश को संभावना बढ्छ - असंगत रंगका विद्यार्थीहरुलाई लागू हुन्छ। यसबाहेक, कालो विद्यार्थीहरु आफ्नो सेतो साथीहरु भन्दा निलम्बन, निष्कासित, वा आचरण को एकै प्रकार को लागी गिरफ्तार गर्न को लागी अधिक संभावना छ। यसबाहेक, कालो विद्यार्थी निलम्बित छन् वा सेतो विद्यार्थीहरु को तुलना मा लगभग ३.५ गुना बढी दर मा निष्कासित।
कसरी रंग को विद्यार्थीहरु प्रभावित छन्
स्कूल देखि जेल पाइपलाइन कारण रंग को विद्यार्थीहरु को एक असमान संख्या स्कूल छोड्न र आपराधिक न्याय प्रणाली मा प्रवेश, जो जीवन परिवर्तन नकारात्मक प्रभाव हुन सक्छ।
उदाहरण को लागी, बिद्यार्थीहरु जो हाई स्कूल पूरा गर्न मा असफल हुन्छन् कैदी हुन को लागी अधिक संभावना छ। यसले उनीहरुलाई एक आपराधिक रेकर्ड दिन्छ, जसले घर बनाउन, buildण निर्माण गर्न, रोजगारी पाउन, र सार्वजनिक सहायताको लागी योग्य हुन अझ गाह्रो बनाउन सक्छ। यसबाहेक, जो एक अपराधी अपराध को दोषी ठहरिएका छन् रोजगार पाउन मा अझ ठूलो बाधा को सामना, र उनीहरु आफ्नो मतदान को अधिकार र वित्तीय सहायता को लागी योग्यता गुमाउन सक्छन्। हाई स्कूल पूरा नगर्ने विद्यार्थीहरु पनि स्नातकको तुलनामा कम तलब कमाउन जान्छन्।
पुनर्स्थापनात्मक न्याय को उपचार शक्ति
स्कूल देखि जेल पाइपलाइन लाई हटाउन को लागी, शिक्षकहरु लाई पुनर्स्थापनात्मक न्याय संग शून्य सहिष्णुता नीतिहरु लाई बदल्नु पर्छ।
एक नयाँ दृष्टिकोण: पुनर्स्थापना न्याय
पुनर्स्थापना न्याय दुर्व्यवहार, मरम्मत क्षति, र समुदाय को भावना को निर्माण को अंतर्निहित कारण बुझ्न खोज्छ। यो प्रक्रिया धेरै पुनर्स्थापना अभ्यासहरु मा टूटिन्छ। पहिलो अभ्यास अनुशासनिक अभ्यास को असमानता लाई सम्बोधन गर्न को लागी नीति र प्रथाहरु को अनुगमन गरेर अनुशासनात्मक उपायहरु लाई अनुचित रूप मा लागू नहुने सुनिश्चित गर्न को लागी हो। दोस्रो अभ्यास एक सहयोगी स्कूल को वातावरण बनाउन को लागी हो कि सजाय को सट्टा सम्झौता र मध्यस्थता मा ध्यान केन्द्रित गर्दछ। तेस्रो अभ्यास पेशेवर प्रशिक्षण र विकास को उपयोग गर्न को लागी सांस्कृतिक क्षमता को विकास, संचार कौशल को विस्तार, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह लाई सम्बोधन, र शैक्षिक आघात को बारे मा जान्न को लागी हो।
पुनर्स्थापना न्याय स्कूल अनुशासन को लागी एक दुर्व्यवहार को अंतर्निहित कारणहरु लाई उजागर गर्न र विद्यार्थी को नतीजाहरु लाई सुधार गर्न को लागी एक वैकल्पिक दृष्टिकोण हो। विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्य र भलाई मा लगानी गरेर, शिक्षकहरु यस देशको भविष्य मा लगानी गरीरहेका छन्।
अमेरिकी नागरिक स्वतन्त्रता संघ, ११ मिलियन दिन हरायो: अमेरिकी पब्लिक स्कूलहरुमा दौड, अनुशासन, र सुरक्षा (भाग १)
ह्यामिल्टन परियोजना, संयुक्त राज्य अमेरिका मा अपराध र कैद को बारे मा दस आर्थिक तथ्य
न्याय नीति संस्थान, जेल पाइपलाइन को स्कूल, व्याख्या
शिक्षा तथ्याistics्क को लागी राष्ट्रीय केन्द्र, सूचक १५; अवधारण, निलम्बन, र निष्कासन
राष्ट्रीय शिक्षा संघ, अनुशासन र स्कूल को जेल पाइपलाइन (2016)
पुनर्वास सपनाहरु लाई सक्षम बनाउँछ, जेल पाइपलाइन लाई स्कूल: मुद्दा, समाधान, र मार्गदर्शक सिद्धान्तहरु लाई विचार गर्न को लागी
सजाय परियोजना, आपराधिक रेकर्ड संग अमेरिकीहरु
सेवा शिक्षा र समुदाय आधारित अनुसन्धान को स्नातक जर्नल, दण्ड देखि पुनर्स्थापना सम्म, उपचार को लागी सजाय: शून्य सहनशीलता नीतिहरु र स्कूल बाट जेल पाइपलाइन संग लड्न को लागी एक स्कूल मा पुनर्स्थापना न्याय को उपयोग
अमेरिकी शिक्षा विभाग, राष्ट्र को स्कूलहरुमा पुरानो अनुपस्थिति
नागरिक अधिकार को लागी अमेरिकी शिक्षा विभाग, 2015-16 नागरिक अधिकार डाटा संग्रह स्कूल जलवायु र सुरक्षा
Youth.gov, जोखिम र सुरक्षात्मक कारकहरु
# स्कूल-देखि-जेल पाइपलाइन
क्यानडा फिलिपिन्स मा शान्ति शिक्षा को लागी १.१ मिलियन अमेरिकी डलर दान गर्दछ
नागरिक शान्ति सेवाले पूर्वी युक्रेनमा शान्ति शिक्षा विशेषज्ञको खोजी गर्यो
के पुन: स्थापना न्याय स्कूल-देखि-जेल पाइपलाइन तोक्न सक्नुहुन्छ?
जुलाई 19, 2016 समाचार र हाइलाइटहरू 0
गत सेप्टेम्बरमा, बर्कले (सीए) टेक एकेडेमीकी प्रिन्सिपल शीला क्विन्टानाले १० विद्यार्थीलाई निलम्बन गर्नु बाहेक अरू विकल्प थिएन किनभने एउटा क्याम्पसमा भडकले छिमेकी बासिन्दाहरूले भिडियोमा खिचे पछि। क्विन्टानालाई थाहा थियो कि विद्यार्थीहरूलाई स्कूलबाट बाहिर निकाल्नु भन्दा अनुशासनात्मक प्रक्रियासँग व्यवहार गर्ने उत्तम तरिका हुनुपर्दछ, जसले उनीहरूलाई व्यर्थताको चक्रमा पठाउन सक्दछ: कक्षामा पछाडि पछाडि जान र अन्तत: दुर्लभ रोजगारीका अवसरहरू छोडेर जोखिम बढाउँदै। अपराध र बन्दी जीवन को।
त्यहाँ एक उत्तम तरिका छ। यो अवधारणालाई पुनःस्थापित न्यायको रूपमा चिनिन्छ, जसमा नाबालिगदेखि मध्यम अपराधका अपराधीहरूलाई सघन कार्यक्रममा ल्याइन्छ जसमा उनीहरूलाई उनीहरूका कार्यका अन्तर्निहित कारणहरू र नतिजाहरूको सामना गर्न नेतृत्व गरिन्छ। [पढ्न जारी राख्नुहोस् ...]
डेनवर स्कूल बोर्डले सर्वसम्मतिले सार्वजनिक स्कूलहरूबाट पुलिस हटाउनको लागि मतदान गर्‍यो
जुन 24, 2020 समाचार र हाइलाइटहरू 0
"कालो बच्चाहरु र रंगीन अनुहारका बच्चाहरुका प्रणालीगत जातीयतालाई पूर्ववत गर्न" अर्को स्कूलले सबै स्कूलबाट पुलिसलाई हटाउन जिल्ला विद्यालय बोर्डले यस हप्ता सर्वसम्मतिले मतदान गर्‍यो। [पढ्न जारी राख्नुहोस् ...]
हकीम विलियम्सको साथ फ्रेश ईड साक्षात्कार: युवा हिंसा र त्रिनिदादमा नियोक्लोकॉनियल शिक्षा प्रणाली
डिसेम्बर 18, 2016 अनुसन्धान 2
विल ब्रेहमको साथ फ्रेशेड साप्ताहिक पोडकास्ट हो जसले शैक्षिक अनुसन्धानमा जटिल विचारहरू सजीलै बुझ्दछ। यस डिसेम्बर १२ को अन्तर्वार्ताले त्रिनिदादमा पाहुना हाकिम मोहनदास अमानी विलियम्ससँग युवा हिंसाको अन्वेषण गर्दछ। हाकिमले त्रिनिदादको अध्ययन देशको औपनिवेशिक भूतकाल भित्र पारे। उनले युवा हिंसालाई सम्बोधन गर्न सक्रियताका साथ नयाँ प्रतिमान पनि सृजना गरिरहेका छन जसले बहाल गर्ने न्याय प्रथाको साथ प्रणाली दृष्टिकोणलाई मिसाउँदछ। [पढ्न जारी राख्नुहोस् ...]